Izinto eziluncedo ngeembiza ezinokucwangciswa | IBezzia
UMaria vazquez | 12/10/2021 12:00 | Ukupheka
Izixhobo ezincinane bayenza lula imisebenzi yethu yemihla ngemihla kunye neembiza ezinokucwangciswa azikho ngaphandle. Ngenxa yesantya esikhoyo sobomi sinyanzelekile ukuba senze izinto ezininzi ngexesha elifutshane kwaye imbiza enako ukusivumela ukuba sihambisane nemisebenzi ethile yasekhaya. Kodwa yintoni imbiza enokucwangciswa?
1 Yintoni imbiza enokucwangciswa?
1.1 Umahluko ngeprosesa yokutya kunye nembiza yokwemba
2 Izinto eziluncedo ngembiza enokucwangciswa
Yintoni imbiza enokucwangciswa?
Iirobhothi zasekhitshini, iimbiza ezinokucwangciswa, abapheki abacothayo ... ngaba siyazi kakuhle ukuba sithetha ukuthini xa sithetha ngezixhobo zombane ezincinci? Nangona sihlala sithande ukuqwalaselana iirobhothi zasekhitshini, azifani.
Imbiza enokucwangciswa ngumbane woxinzelelo ngombane. Uyilo lwayo luyafana nolo lwefryer enzulu: inesiciko kwinxalenye ephezulu ekuvumela ukuba ufake izithako, ivelufa efana naleyo yeepani zemveli ezikhawulezayo, ezilinganisa inkqubo yazo, kunye nethermostat.
Iimbiza ezinokucwangciswa zinepaneli yangaphambili kwifayile ye- Kuya kufuneka ukhethe kuphela inkqubo oyifunayo. Benza isitshixo, i-fry, i-steam, i-grill, bhaka ... kwaye bayakwazisa xa ukutya kwenziwe. Zicwangcisiwe, ke unokutya okulungiselelwe ngexesha olikhethileyo, njengoko lisandula ukwenziwa. Kuthekani ukuba umbane uyacima? Awuyi kuba nexhala: xa ebuya uya kuqhubeka kanye apho ebeyeke khona, ngenxa yenkumbulo yakhe.
Uninzi lweembiza ezinokucwangciswa nazo zine ubushushu kunye nokukhetha kwakhona ukhetho, ekuvumela ukuba ungazingcolisi izitya ezingaphezulu. Kwaye kuqhelekile ukuba banamaqhosha okubonisa ukuba bazicoca ngokwabo.
Umahluko ngeprosesa yokutya kunye nembiza yokwemba
Nguwuphi umahluko phakathi kwesi sixhobo kunye nerobhothi yasekhitshini? Ngelixa imbiza enokucwangciswa «solo» abapheki, irobhothi yasekhitshini iyagqitha, ikwalungisa ukutya. Oku kukuthi, kwirobhothi yasekhitshini ungayisika, uyityumze uxovule ... Kwaye uthini malunga a Imbiza yokupheka ngokucotha? Sithethile ixesha elide kwaye kunzima malunga nolu hlobo lweembiza ixesha elide; Zizimbiza zemveli kodwa zombane ukupheka kubushushu obuphantsi.
Abapheki abacothayo bonke ngumsindo
Izinto eziluncedo ngembiza enokucwangciswa
Ukwazi ezona mpawu ziphambili zembiza enokucwangciswa, kulula ukuba uqikelele iingenelo esizibonayo. Ukuba upheka rhoqo kodwa awunalo ixesha elininzi okanye awunqweneli kuchitha okuninzi, ezi, ngaphandle kwamathandabuzo, lukhetho olufanelekileyo kwezi zizathu zilandelayo.
Zilula. Nabani na okwaziyo ukusebenzisa imbiza enokucwangciswa. Kuya kufuneka uyipakishe, faka izithako, ukhethe inkqubo yokupheka kwaye ulinde isitya silungele.Ukucinezela uxinzelelo kuya kuba lula njengokucofa iqhosha.
Banciphisa ixesha lokupheka. Ungapheka ngokufanayo embizeni yesintu kodwa ngexesha elifutshane kuba ipheka ngoxinzelelo oluphezulu. Ngaphandle kokuyazi, iya kupheka izitya zakho ngokukhawuleza.
Sebenzisa amandla amancinci nombane kunembiza eqhelekileyo. Ngokunciphisa ubushushu obonelelweyo kunye nexesha lokupheka, ungonga ukuya kuthi ga kwi-70% yamandla, eya kuthi ichaphazele ngokuqinisekileyo ityala lakho lombane.
Bakhuselekile. Ezi mbiza zokucwangcisa zinobuchwephesha obenza ukuba zikhuseleke kakhulu. Libala malunga nokutsha okungafunekiyo kunye neziganeko ekhitshini ngenxa yoxinzelelo olukhulu. Zineenkqubo ezikulumkisayo ukuba isiciko asivalwanga ngokufanelekileyo kwaye bane-pulsed compression system, ukuthintela ukutsha xa uvula isiciko.Ukongeza, uyawuthintela umngcipheko wokulibala umlilo: iyakulumkisa xa ugqibile kwaye ngokuzenzekelayo icime xa igqityiwe.
Bayakuvumela ukuba upheke yonke into. Uninzi luneenkqubo ezahlukeneyo zokupheka: i-turbo, uxinzelelo, i-steamed, i-stew, i-poaching, i-confit, i-rice, i-pasta, i-griddle, i-fry, i-fry, i-oven ... Kwakhona kufakwe ebhokisini yincwadi enezimvo ezininzi zokulungiselela imenyu yakho yeveki kulula. Hlala phantsi imizuzu eli-10 rhoqo ngeCawa, ufumane izimvo zokulungiselela imenyu yeveki yonke kwaye ulibale ukuzibuza usuku ngalunye ukuba uza kupheka ntoni ngosuku olulandelayo.
Ngaba ufumana iipotyi ezicwangcisiweyo zotyalo-mali lwekhitshi lakho?
Umendo opheleleyo kwinqaku: IBezzia » Ikhaya » Ukupheka » Izinto eziluncedo ngeembiza ezinokucwangciswa
ISagrada Familia: Uthotho lweNetflix eNtsha yaseSpain